तपाईँ भुइँमा सुत्न थाल्नुभयो भने यी कुनै पनि समस्याले सताउँदैनन् – Khabar Silo
तपाईँ भुइँमा सुत्न थाल्नुभयो भने यी कुनै पनि समस्याले सताउँदैनन्
कम्मर दुख्ने समस्या अहिले आम समस्या भएको छ र जुनसुकै उमेरका मानिसलाई यसले सताउँछ । तपाईंमा पनि यो समस्या छ भने भुइँमा सुत्न थाल्नुस् ।काँध र गर्दनमा पीडा हुने समस्या आजकलका मानिसलाई खुबै हुन्छ । लगातार कम्प्युटरमा काम गर्ने, झुकेर हिँड्ने, सही पोजिसनमा नबस्ने र गलत तरिकाले सुत्ने गर्दा यस्ता समस्या आउँछन् । काँधलाई सिधा पार्न र गर्दन दुखेको निको पार्न पनि भुइँमा सुत्न थाल्नुस् ।
बेस्सरी थाकेर पनि निद्रा लागेन भने तपाईं भुइँमा सुत्न थाल्नुस् । यसो गर्दा तपाईंलाई गजबको निद्रा लाग्छ र उठेपछि पनि थकान र टाउको दुख्नेको साटो ताजापन अनुभव हुन्छ ।शरीरको क्षमताअनुसार भुइँमा सुत्न थाल्नुस् त । तपाईं कति आनन्दित महसूस गर्नुहुनेछ !
औषधीय गुण, कसरी प्रयोग गर्ने ?
Posted on July 19, 2020 July 19, 2020 Author khabar silo
प्रायः गाउँघरमा उम्रिने यो झारबारे सबै परिचित होलान् । ठाउँ अनुसार यसका विभिन्न नामहरु भए पनि यसको बैज्ञानिक नाम ‘पर्सलेन’ हो । असार–साउनको महिनामा खेतबारी तथा पर्खालमा यो झार निकै मात्रामा उम्रिन्छ । मानिसहरु यसलाई जंगली बुट्यान ठानेर लुछेर मिल्काउँछन् । यसमा पोषण तत्त्वहरू भरपूर मात्रामा पाइन्छ भन्ने विषयका सबैलाई जानकारी हुँदैन । घरमा उम्रने […]
‘भिटामिन-डी’ बोसोमा घुल्न सक्ने र ‘भिटामिन ए’जस्तै शरीरमा जम्मा भएर रहिरहन सक्ने पौष्टिक तत्व हो । सूर्यको किरणबाट प्राप्त हुने ‘भिटामिन-डी’ प्रो–हर्मोनको समूह हो । शारीरिक मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि यो अत्यावश्यक छ । शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिमा ‘भिटामिन-डी’को सीधा सम्बन्ध हुनाले कोभिड-१९ को जोखिम कम गर्न चिकित्सकहरूले यो पौष्टिक तत्व पाइने […]
विबाहपछि पतिसंग अन्तरवार्तामा आएकी आँचल यसरी खुलिन् (भिडियो हेर्नुहोस्)
Posted on January 4, 2021 Author khabar silo
नायीका आँचल श्रेष्ठसंगको वि’वाह पछि अहिले उदिप श्रेष्ठ पनि मिडियामा छाइरहेका छन् । आँचलको प्रेम र विवाह जि’वनका बारेमा गरिने चर्चामा उदिप जो’डिन आइपुग्छन् । विवाह लगत्तै लकडाउन भएका कारण उदिप र आँचल निकै लामो समय संगै समय बि’ताउन पाएका छन्। उनीहरुले घरमै निकै रमाइलो समय बिताएका थिए । लकडाउनको अन्त्यसंग आँचल फेरी काममा फ:र्कीएकी […]
घिउ कति स्वस्थकर ? यस्तो भन्छ विज्ञान